अनुप्रयोग स्टोर र अन्य एप्पल सेवाहरूका समस्याहरू छन् आईफोन समाचार
अनुप्रयोग स्टोर र अन्य एप्पल सेवाहरूको अहिले समस्या छ
अद्यावधिक: एप्पल भन्छन् कि सबै चीज सामान्य रूपमा काम गर्दछ।
के तपाईं एप्पल स्टोरहरू मध्ये कुनैमा समस्याहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ? यो नसोच्नुहोस् कि समस्या तपाईंको टीममा छ। लेख्ने क्रममा यी लाइनहरू हुन् धेरै सेवाहरू असफल एप्पल, जस्तै App स्टोर र अन्य स्टोरहरू। कुलमा, to वटा सम्म सेवाहरू पहेंलो रंगमा हुन्छन्, यसको मतलब यो हो कि असफलता केही प्रयोगकर्ताहरूद्वारा अनुभव गरिएको हुन्छ र अर्कोतर्फ, अरूहरूले सामान्य रूपमा तिनीहरू पहुँच गर्न सक्दछन्। यसको मतलब यो पनि हुन सक्छ कि यी सेवाहरू उनीहरू भन्दा सामान्य ढिलो भइरहेको छ।
सत्तारूढ आधिकारिक रूपमा शुरू भएको छ साँझ 16 बजेको भन्दा पहिले (स्पेनिश प्रायद्वीप समय) यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं कि एप्पलले सामान्यतया सेवाहरूको स्थिति परिवर्तन गर्दछ जब समस्या उचित समयको लागि देखा पर्दछ, हामी सोच्न सक्छौं कि यो एक डेढ घण्टा भन्दा बढी भएको छ कि पहिलो प्रयोगकर्ताहरू यी पहुँच गर्न सक्षम नहुने बनाउन थालेका छन्। सामान्यतया सेवाहरू। र, यो भन्नु पर्छ, यो पहिलो असफलता टिम कुक द्वारा निर्देशित कम्पनी को सेवा द्वारा प्रस्तुत हप्ताहरु मा प्रस्तुत गरिएको छैन।
अनुप्रयोग स्टोर र अन्य एप्पल स्टोरहरू असफल भइरहेका छन्
अहिले तलका सेवाहरूमा समस्याहरू हुनसक्छन्।
म्याक अनुप्रयोग स्टोर।
भोल्यूम खरीद कार्यक्रम।
ध्यानमा राख्दै कि त्यहाँ धेरै स्टोरहरू छन् जुन अहिले समस्या भइरहेको छ, म सिफारिस गर्दछु कि कुनै पनि सामानहरू सामान्यमा फर्केर नआउन्जेल। यदि तपाइँ एक गर्नुभयो र सबै कुरा राम्रो हुँदै गयो भने, यो उत्तम हो कि तपाई एप्पललाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईले शुल्क लिन चाहानुहुन्छ जुन तपाई रमाईलो गर्न सक्नुहुन्न वा कुनै समस्या छ जुन तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, केही तपाई ट्यूटोरियल अनुसरण गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी आईफोनबाट एप स्टोरबाट रकम फिर्ताको अनुरोध गर्ने.
हामी तपाईंलाई यो पोष्ट अपडेट गरेर सूचित गर्नेछौं जब सेवा सामान्य रूपमा फेरि काम सुरु गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » अनुप्रयोग स्टोर र अन्य एप्पल सेवाहरूको अहिले समस्या छ
जानकारी को लागी धन्यवाद, ठीकै हो, केही समय अघि म प्रभावित भएको थियो। मेरो समस्या App Store को साथ थियो। अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न चाहान्छु, म "get" बटनमा सबै चोटि उछाल गर्दै थिएँ, त्यसैले मैले सोचेँ कि यो मेरो आईफोन हो। अब मैले स्क्र्याचबाट उपकरण पुनःसेट गर्छु र सबै ठीक छ!
Saylor लाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोन xx6 समाचार पोडकास्ट: आईप्याड एयर।